Nepal Dayari | खुसीको खबर : आजदेखी पसलहरु खोल्न पाइने, यस्तो छ सरकारको नियम !
खुसीको खबर : आजदेखी पसलहरु खोल्न पाइने, यस्तो छ सरकारको नियम !
जेठ २१, २०७८ शुक्रबार ५४१ पटक हेरिएको
काठमाडौं : काठमाडौंमा २१ गतेदेखि खाद्यान्न बिक्री र पूर्वाधार निर्माण कार्य खुला गरिने भएको छ । बुधबार बस्न लागेको काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले खाद्यान्न बिक्रीको लागि मात्रै किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि खोल्न दिने तयारी गरेको बताइएको छ ।
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले अब थपिने निषेधाज्ञामा खाद्यान्न बिक्रीको लागि किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर खोल्न दिने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
बुधबार बिहान १० बजे काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बस्ने बैठकले यस बारेमा निर्णय गर्नेछ । बैठकले थप एक साता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी समेत गरेको छ ।
भट्टराईका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पूर्वाधार निर्माण पनि खुला गरिने भएको छ । निर्माण क्षेत्रमा नै कर्मचारी राखेर सञ्चालन गरिने पूर्वाधार निर्माण कार्य स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर अघि बढाउन सक्ने निर्णय सीडीओहरुले गर्न लागेका हुन् । निर्माण सामग्री ओसार्नको लागि भने रातिको समय तोकिएको छ ।
हाल उपत्यकामा पूर्वाधार निर्माणमा समेत रोक लगाइएको थियो । अबभने निर्माणको क्रममा स्वास्थ्य मापदण्ड भने लागू गर्नुपर्ने शर्त राखेर उक्त खएको छ ।
अब थप गरिने निषेधाज्ञामा पनि सार्वजनिक र निजी सवारी भने नखुल्ने भएको छ । भट्टराईले अहिले नै सार्वजनिक सवारी खोल्ने विषयमा छलफल नै नभएको जानकारी दिए ।
निजी सवारीको हकमा पनि अत्यावश्यक काम बाहेक हिँडडुलमा प्रतिबन्ध नहटाइएको भट्टराईले जानकारी दिए । कोरोनाको महामारी साम्य नलागिसकेकोले अहिले नै सवारी साधन खुला गर्दा यसले समस्या जटिल हुने जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप १० दिन लम्ब्याउने तयारी भइरहेको छ।
मंगलबार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच निषेधाज्ञा थप्नेबारे छलफल भएको थियो।
सो छलफलले अहिलेको निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाएर १० दिन थप्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
निषेधाज्ञा थप्ने आदेश आजमात्रै जारी हुने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।
जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेपछि तीन जिल्लाका सिडिओबीच छलफल भएको हो।
आज १० बजेतिर आदेश जारी हुन्छ,’ प्रजिअ पराजुलीले भने, ‘तीन वटै सिडिओबीच छलफल गरियो। अब यसलाई फाइनल रिपोर्ट बनाएर जारी गर्छौ।’ सिडिओहरूबीच मंगलबार छलफल भएको थियो।
प्रशासनले काठमाडौं उपत्यकामा थप जेठ मसान्तसम्म निषेधाज्ञा जारी थप्ने तयारी गरेको भक्तपुरका प्रजिअ प्रेमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार २१ गतेदेखि खाद्यान्न पसल बिहान खोल्न दिने, विकास निर्माणको काम पनि सुचारू गर्ने तयारी छ।
जारी निषेधाज्ञालाई अझ व्यवस्थित गरेर खाद्यान्न सामग्री सहज गर्ने भन्ने छ। विकास निर्माणको कार्यथलोमै कामदारहरूलाई राखेर गर्ने र उनीहरूले सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने भन्ने कुरा छ,’ उनले भने,’ आज डिटेल आउँछ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले उद्योग सञ्जालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिए।
‘२१ गते देखि लागू हुने गरी खाद्यान्न व्यवसायहरूलाई सहजीकरण गर्ने, आवश्यक जनशक्ति राखेर उद्योग सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भएको छ। मसान्तसम्म लागू गर्नेबारे छलफल भएको छ,’ उनले भने। अनलाइन स्टार टिभि बाट